KASỊ EGWU EGWUREGWU FIFA 19 KACHASỊ EWU EWU - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
FIFA 19 - ihe egwuregwu egwuregwu kachasị ewu ewu nke na-eme ka ndị na-eme egwuregwu na-ekele ọrụ na-adọrọ adọrọ na nke na-eri ahụ n'Ịntanet. Ka ọ na-erule ngwụsị afọ 2018, ndị egwuregwu jisiri ike na-etinye ọtụtụ narị nde ịlụ ọgụ na mpaghara ndị gụrụ oghe, na-eji emem dị iche iche. Otú ọ dị, na obodo ndị na-egwu egwu, enwere ike ịme ụfọdụ ndị egwuregwu maka ọnọdụ ọ bụla. Kedu kaadị ndị egwuregwu FIFA 19 na-ewu ewu? A okorobịa ọtụtụ mgbe na-na Ultimate Team egwuregwu, na nke a abụghị Cristiano Ronaldo, Lionel Messi na Neymar!
Ndị na-agbasi obi ike
Onye nchịkọta kachasị mee ihe na njedebe kachasị mma bụ onye na-elekọta ndị otu mba Belgian na nke Real Madrid football club Thibault Courtois. Onye nche nke ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ eze ahụ weere òkè na ihe dị ka nde mmadụ iri na atọ n'ịntanetị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ bụghị onye ọkpụkpọ kachasị elu n'ọkwá ya.
Na ngụkọta nke 90, ọ dị ala karịa onye nchịkọta mgbatị na Manchester United David de Gea, bụ onye were nanị ebe anọ na nde 11. Na nke abụọ bụ onye mmeri ụwa na onye na-eche nche Tottenham Hugo Lloris.
N'elu aka nri nke ihe nchebe, ndị na-egwu egwu na-etinyekarị misja na Kyle Walker. Ogige Manchester City dị ngwa ma dị ike na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbachitere ma na-akwado ọ bụla ọgụ ọ bụla n'ihi ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ya. Maka kyle Walker kaadị, Team kachasị na-egwu egwuregwu 12.8 nde.
N'elu nke abụọ, ọ bụ onye asọmpi maka ọrụ Manchester United Antonio Valencia, bụ nke e ji egwuri egwu 11.5 nde. Ihe kachasị dị elu nke ise kachasị dị ka onye ọkpụkpọ Juventus, bụ Zhao Cancelo nke Portuguese, nwere kaadị ozi na nkà nke 86 mpaghara.
Ọnọdụ nke aka ekpe n'agbata 12.3 nde na-ahụ site na mpụta nke Juventus Alex Sandro. Onye ọkpụkpọ Brazil nwere nkà dị nro, ọsọ ọsọ ọsọ, ọmarịcha nchebe na mkparị na ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ 86.
Ọ na-atụgharị Jordi Alba site na ọnụ ọgụgụ nke 87 maka egwuregwu 4 nke onye na-esote ya na Barcelona. Ọ bụ ihe na-akpali na site na njirimara dị ukwuu nke ọrụ Alba na-efu ihe dị ka okpukpu atọ karịa ọnụ ala karịa Sandro - nanị mkpụrụ ego 36,000 megide 89, nke ị na-enye onye Brazil.
Onye na-ewu ewu nke kachasị na-ewu ewu n'Ọmịntị kachasị ghọọ ndị na-akwụ ụgwọ na Tottenham center na ndị òtù Colombia, Davinson Sanchez. Onyinye onye na-egwu ihe ga-efu naanị mkpụrụ ego iri na isii, mana ezigbo ọsọ ya, nkà ndị nwere nchebe na ọnụ ọgụgụ zuru oke nke iri asatọ na asatọ ga-atụle nke ọma karịa ọnụ. Sanchez bụ onye na-agbachitere ya na mita 15.6.
Onye na-agbachitere ya nke abụọ kachasị ewu ewu, bụ onye Sanchez na-egwuri egwu n'otu ụzọ, bụ onye mmeri ụwa na onye mmeri Rafael Varan nke atọ.
Kaadị ya na ọnụego nke 86 ga-eri ego ego 182. Maka ugbo egwuregwu 13.2 na-egwu n'Ịntanet.
Ọnọdụ nke opornik na-ejikarị ọnụ ọgụgụ dị ala karịa Liverpool, Fabinho Brazil. Onye ọkpụkpọ ahụ na-eche onye iro ukwu ma na-achọkarị bọl. Tụkwasị na nke ahụ, na ọnụego 85, Fabinho nwere oke mbu na ọsọ dị mma. A na-egwuri egwu egwuregwu iri abụọ na anọ maka kaadị ya.
Nke abụọ opornik na ewu ewu bụ Ngolo Kant. Onye mmeri ụwa na mgbidi Chelsea nwere ego ruru puku anọ, ma ndị egwuregwu anaghị eme ihere iji nye ego dị ka obere ego.
Ihe dị nde 12.6 na njiriri nke 89 nkeji - ihe ọzọ ọ dị mkpa ka ị wulie ezigbo ogige nchebe?
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị a ma ama nke football nke oge a, bụ Paul Pogba, na-ewere ọnọdụ nke etiti midfielder. Kaadị ọzọ nke ndị egwuregwu na-adịghị eme ihere iji nye ego ha natara na ọsụsọ na ọbara.
400,000 - nke ahụ bụ ụgwọ nke onye French French. A na-etinye kaadị ya n'ọnọdụ nke etiti midfielder 13.5 nde ugboro. Na ihe na-enye echiche na Pogba adịghị adaba otu egwuregwu maka ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ!
The German Singer Sane, bụ onye mara mma, pụtara n'elu n'etiti ndị kasị ewu ewu egwuregwu na n'aka ekpe nke ọgụ. Na-egbuke egbuke, onye na-eto eto na-eto eto nke nwere nnukwu punch na Paz dị ịtụnanya ruru ego 50,000.
Na ntanetị online, a họọrọ ya ugboro 11. Onye na-esote ya bụ Senegalese si Liverpool bụ Sadio Mane, bụ onye ha ji egwu 1 nde. Ihe ise kachasị na-agụnye Hyun Min Nwa, Douglas Costa na Anthony Marcial. Ndị nke a, n'ụzọ, na-edekọ akụkọ nke ọnụ ala - 6 puku ego.
Ikekwe ndị na-eto eto na-eto eto nke oge anyị, onye French bụ Kilian Mbappé, nọ n'ọnọdụ nke onye aka nri. Ọ bara uru na puku ego iri atọ na atọ, n'ihi na ọ nwere ọsọ ọsọ, usoro dị egwu na enyemaka dị egwu.
Onye na-enwu gbaa si PSG, bụ onye na-aga Olympus nke football ụwa, pụtara na aka nri nke ọgụ ahụ ugboro iri na abụọ. Onye na-agbaso ya, Mohamed Salah si Liverpool, jiri oge nde 10.7, ma enwere ọnụ ọgụgụ dị elu karịa Mbappa - 88 megide 87.
N'ime ndị na-egbu egbu, Gabriel Jesus, bụ ebe dị umeala n'obi ma dị mma, biliri n'ebe mbụ. Onye Brazil si Manchester City dị ihe dị ka puku mkpụrụ ego asaa, ma ọ nwere ọsọ dị ịtụnanya na ọkpụkpụ dị ike. Tụkwasị na nke a, Jizọs, n'agbanyeghị oke ntà, na-etinye ozu ahụ n'ụzọ zuru oke, si otú a merie ọnọdụ ahụ ma meghee njem ahụ nke ọma. A họọrọ Gabriel n'òtù egwuregwu 12.6.
Onye na-achụso ya na mberede wee ghọọ Sevilla Ben Yeder onye na - eti ọkpọ, ma ọ bụ kama nke ahụ, kaadi kadị ya na ọkwa nke 84. Onye France na-eji egwuregwu 12 egwu egwu. Ọzọ bụ Roberto Firmino, Antoine Grisma na Dries Mertens.
Mgbe ịchọtara ihe ndị mejupụtara kaadị ndị kachasị ewu ewu nke egwuregwu FIFA 19, ị ga-ahụ na ị nwere ike ịme egwuregwu na-enweghị nchekasị na nke ọma. Ndị na-egwu egwuregwu enweelarị onwe ha n'ọkwá dị elu n'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ egwuregwu. A na-eme ka ewu ewu ha dị ala site na ọnụ ala dị ala na nkà dị mma.